crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Shiinaha oo diiday la bixista magacyo Islaam | HimiloNetwork
Shiinaha oo diiday la bixista magacyo Islaam
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka September 28, 2015	0 259 Views
HOTAN (Himilonews) – Maamulka Shuyuuciyadda Shiinaha ayaa gebi ahaanba u diiday Muslimiinta ku nool gobolka dhaca waqooyi-galbeed ee dalkaasi la bixista magacyada Islaamiga ah.
“Magaca gabadhayda waa Muslimah, marka waxaa guriga noogu yimid bileyska kuwaas oo nagu amray inaan magaca ka badalno gabadhayda sida ugu dhaqsiyaha badan,” haweeney Uighur ah oo Turakhan lagu magacaabo ayaa u sheegtay Radio Free Asia.
“Bileysku waxay noo sharaxeen in magacyada qaar sida Muslimah si rasmi ah loo mamnuucay. Marka sidaas loo eegana, waxaa nagu qasab ah inaan magaca ka badalno gabadheenna.”
Haweeneyda Muslimadda ayaa dib-u-tirineysay sida loo warsan jiray inay magac-Muslimka ka badasho inanteeda kaas oo diidan ka noqday Xinjiang.
“Waa go’aanka dowladda hoose waaxyaha degmada. Hana isku dayin inaad na weydiisaan su’aalo aan nagu habooneyn,” ayay bileysku u sheegeen Turakhan.
Magacyo dhowr ah oo gaaraya 22-magacyood oo ay ku jiraan 15—magacyo dhedig ah ayaa lagu xusay diiwaanka ay ku qorneyd mamnuucista la bixista magacyo Islaami ah; tani waa dadaal ay ku doonayaan inay ku xadidaan Xagjirnimadu inay ku baahdo gobolka leh aqlabiyad Muslimiin ah.
Ogeysiin rasmi ah ayaa lagu sheegay in—magacyada Muslimiinta sida Bin Ladin, Saddaam, Hussein, Aarafaat, Mujaahid, Mujahidulla, Asadullah, Adbul-aziz, Seyfullah, Guldulla, Seyfiddiin, Zikrulla, Nesrullah, Shemshidiin iyo Pakhirdiin la mannuucay.
Amanet, Muslimah, Mukhlisah, Munise, Caishe, Fatima, Khadiija ayaa ah toddobada magac ee dhedig kuwaas oo iyagana la bixistooda la mamnuucay.
Marka loo eego dadka deegaanka, caruurta Muslimiinta ee leh magacyadaas la mamnuucay, waxaa laga diidi doonaa inay dugsiyada dowladda iyo xarumaha xanaanada wax ka dhigtaan.
Mamnuucista la bixista magacyada Islaamiga ah waxaa canbaareeyey wax-garadka Uighur kuwaas oo ku tilmaamay “Go’aan doqoniimo ah.”
“Qaadashada magac diimeed iyo mid dhaqameed waa xaq Aadmiga aasaasi u ah,” ayuu yiri Ilshat Hessen oo ah madax-weyne ku-xigeenka Ururka Uighur Maraykanka oo Washington saldhig u ah.
“Xitaa dastuurka Shiinaha iyo xeerarka kala duwan ee laga yaqaan Shiinaha, mamnuucistan oo kale laguma yaqaan.”
Wuxuu intaas kusii daray in lakabyo sare oo kamid ahaa saraakiisha Uighur ee sal-dhigga u ahaa doorkii dhalashada Shuyuuciyadda ay magacyadooda ahaayeen Islaami sida Seyfidiin Aziz, Ismaaciil Axmed iyo Nuur Bakri taniyo kacaankii Shiinaha ee 1949-kii.
“In-kabadan 80% magacyo-dhaqameedyada Uighur waa Islaami kuwaas oo lagala soo baxay Qur’aanka iyo ilaha kale ee diinta,” ayuu sii tilmaamay.
Ramadaankii dhawaa, qeybo kamid ah galbeedka fog ee degmada Xinjiang waxaa laga mamnuucay Muslimiinta oo dhan inay gutaan soonka intii lagu jiray bisha barakaysan.
Sanadkii hore, xukuumadda Shiinaha waxay ka mamnuucday xirashada indha-shareerka Urumqi oo ah caasimadda gobolka Xinjiang. Waxay sidoo kale mamnuucday ku gudashada waajibaadka Islaamiga ah xarumaha dadweynaha iyo qaadashada dharka la xiriira hab-dhaqanka Islaamka.
Maydii hore, dukaannada Muslimiinta iyo maqaaxiyaha ee ku yaalla xaafada Shiineeska ee gobolka Xinjiang ayaa la faray inay iibiyaan sigaarka iyo khamriga, haddii kale la xiri doono.
Previous: Hanbalyo Bahda Himilonews.com
Next: Muslimiinta Afrikada Dhexe oo waayo adag ku sugan
Aabe Muslim ah oo cafis u fidiyay dilaaga wiilkiisa!!
Hooyo – si ay deynta iskaga bixiso – Mataanaheeda iska iibisay.
Baroordiiq loo sameeyey Muslimad lagu dilay Texas
Ciriiriga Caasimadda iyo Xilliga Afurka.